स्रष्टाहरुले गलत कुराको आलोचना गर्ने नैतिक साहस गुमाउनुहुन्न | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / स्रष्टाहरुले गलत कुराको आलोचना गर्ने नैतिक साहस गुमाउनुहुन्न
स्रष्टाहरुले गलत कुराको आलोचना गर्ने नैतिक साहस गुमाउनुहुन्न
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता, शनिबारको सौगात - साहित्य विशेष January 5, 2019	0 281 Views
डा. अमर गिरी, वरिष्ठ साहित्यकार
वरिष्ठ कवि एवं समालोचक अमर गिरी नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानका निवर्तमान प्राज्ञ परिषद् सदस्य एवं प्रगतिशील लेखक संघका निवर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । चलचित्र विकास बोर्डका कार्यकारी अध्यक्षसमेत रहिसक्नुभएका गिरीका घाम छेक्ने पहाड (२०५५), तर पनि हामी जीवित छौं (२०६१), दुःसाध्य समय (२०६४), शब्दहरुका बीचमा (२०७१) र समय संवाद (२०७१) कवितासंग्रह प्रकाशित छन् । समय समाज र संस्कृति (२०६७), समकालीन नेपाली कविताको वैचारिक परिप्रेक्ष्य (२०७३), भूमण्डलीकरण र साहित्य (२०७४), कवितामा वर्गद्वन्द्व (२०७५), साहित्य विमर्श (२०७५) उहाका समालोचनात्मक कृतिहरु हुन् । उहाले आधा दर्जन कृतिको सम्पादन समेत गर्नुभएको छ । अहिले उहा“ भृकुटी (साहित्य सम्वन्धी अनुसन्धानमूलक जर्नल) का अतिथि सम्पादक हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ– उहासग आभाष बुढाथोकीले गर्नुभएको साहित्यिक कुराकानीको सारसंक्षेप । – सम्पादक
दाङमा फर्किएपछि कसरी समय बिताइरहनु भएको छ ?
साथीभाइहरुसँग भेटघाट र पढाइलेखाइमा दिनहरु बित्दैछन् । अहिले काठमाडौं जाँदैछु । फागुनदेखि स्थायीरूपले दाङ बस्ने गरी फर्कनेछु । २०६० सालमा म काठमाडौं गएको थिएँ । डेढ दशकपछि दाङ फर्कदैछु । राजधानीमा स्थायीरूपमा बस्ने सोचाइ बनाएर मैले दाङ छोडेको थिइन । कतिपयलाई कम्युनिष्ट पार्टीको पूर्ण बहुमतको सरकार भएको बेला अमर गिरी किन दाङ फर्कदैछ भन्ने लागेको पनि पाएँ । मेरो फर्काइको त्यस्तो विशेष कारण केही छैन । राजधानीमा बसेर गर्ने काम अब दाङमै बसेर पनि गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षसहित म दाङ फर्किन लागेको हुँ ।
अहिले सौन्दर्यशास्त्र र भारतीय कम्युनिष्ट आन्दोलसम्बन्धी केही पुस्तकहरु पढ्दैछु । सीतारामको “पश्चिम बंगाल” र विजयप्रसादको भारतको कम्युनिष्ट आन्दोलनसम्बन्धी पुस्तक “नो फ्रि लेफ्ट” भर्खरै पढेर सकें । अहिले विद्युत चौधरीको “कम्युनिज्म इन इन्डिया” पढ्दै छु । सीतारामले आफ्नो पुस्तकमा पश्चिम बंगालकाे फेरिदो रंग र बद्लिदा चुनौतीहरुको बारेमा चर्चा गरेका छन् । कम्युनिष्ट सरकार किन असफल भयो ? उनीहरु चुनावमा किन पराजित भए ? तृणमूल कांग्रेस सत्तामा कसरी आयो ? आदि जस्ता प्रश्नहरुको उत्तर खोज्ने प्रयास पनि उनले आफ्नो पुस्तकमा गरेका छन् । एक पत्रकारका रुपमा उनले गरेको विश्लेषण अत्यन्त गम्भीर र मननीय रहेका छ । विजयप्रसाद विख्यात माक्र्सवादी लेखक हुन् । उनले आफ्नो पुस्तकमा भारतीय कम्युनिष्ट आन्दोलनको सामान्य तस्बिर प्रस्तुत गर्दै निर्वाचनमा कम्युनिष्टहरुको पराजयको बारेमा गम्भीर विश्लेषण गरेका छन् । पराजयका कारणहरुको गम्भीर विश्लेषण मात्र पुस्तकमा गरिएको छैन, कम्युनिष्टहरुले आफूलाई पुनः कसरी बलियो बनाउन सक्छन् भन्ने विषयमा पनि गहन विचारहरु प्रस्तुत गरिएको छ । नेपालमा कम्युनिष्टहरुको पूर्ण बहुमतको सरकार भएको बेला भारतीय निर्वाचनमा कम्युनिष्टहरुले व्यहोर्नु परेको पराजयका कारणहरु हाम्रा निम्ति विशेष मननीय रहेका छन् । भारतीय पाठ नेपालका निम्ति विशेषरूपमा सान्दर्भिक छ र यसबाट गम्भीर शिक्षा लिन जरुरी छ । यहाँ त शुरुवातमै समस्याहरू देखापरिसकेका छन् ।
पुस्तक तयार गर्दैछु । पाँच छ महिनापछि पुस्तक बजारमा आउनेछ । यो पुस्तक पनि समालोचनाकै रहेको छ । कवितासंग्रह अलिपछि प्रकाशनमा ल्याउनुपर्ला भन्ने सोच बनाएको छु ।
साहित्यलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
साहित्य आफ्नो समय र समाजसँग गहिरो गरी जोडिनुपर्छ । त्यसले यसका सुख–दुःख, आँसु–हाँसो, स्वप्न–संघर्ष, घात– प्रतिघात आदिलाई सजीव कलात्मक अभिव्यक्ति दिन सक्नुपर्छ । साहित्य आफ्नो समयको यथार्थसँग जोडिएर, अँध्यारो विरुद्धको मनुष्यको संघर्ष र उज्यालोको भोकलाई प्रभावकारी अभिव्यक्ति दिएर एवं सत्यं, शिवं र सुन्दरम्का पक्षमा उभिएर नै जीवन्त बन्न सक्छ । साहित्यको समाजपरक एवं सौन्दर्यपरक भूमिकाको आलोचना गर्ने दृष्टिकोण गलत छ । साहित्यले जीवन र जगत्को कलात्मक पुनःसिर्जना गर्दै सम्पूर्ण विभेद र उत्पीडनबाट मुक्त मनुष्य समाज निर्माणका निम्ति योगदान दिन सक्नुपर्छ । मेरा निम्ति साहित्य सुन्दर संसार निर्माणको कलात्मक हतियार हो । म साहित्यलाई उसको परिवर्तनकारी भूमिकाबाट अलग गर्ने समस्त दृष्टिकोण र भूमिकाको प्रतिवादमा निरन्तर उभिदै आएको छु ।
प्रगतिशील साहित्यको परिभाषा के हो ?
प्रगतिशील साहित्यलाई परिभाषित गर्नु अघि यस सम्बन्धमा केही थप कुरा गर्न आवश्यक छ । नेपालको प्रगतिशील साहित्यिक आन्दोलनमा ‘प्रगतिशील’ र ‘प्रगतिवाद’ शब्दका बारेमा निकै छलफल भएको छ । यस्तो छलफल भारतमा पनि भएको छ । भारतमा यी दुबै शब्दलाई समान अर्थ प्रदान गर्ने शब्दका रुपमा धेरैले प्रयोग गरेको पाइन्छ । नेपालमा पनि प्रगतिशील साहित्यिक आन्दोलनमा लामै समयसम्म यी दुबै शब्दलाई समान अर्थमा प्रयोग गर्ने गरियो । पछि प्रलेसभित्र र बाहिर यस विषयमा गम्भीर छलफल आरम्भ भयो र प्रगतिशील र प्रगतिवादका बीचको भिन्नतालाई रेखाङ्कित गर्ने काम गरियो । यी दुबै समान अर्थ प्रदान गर्ने शब्द होइनन् । प्रगतिवादी साहित्य स्वतः प्रगतिशील हुन्छ तर प्रगतिशील साहित्य प्रगतिवादी हुन सक्दैन । प्रगतिवाद साहित्यसम्बन्धी माक्र्सवादी दृष्टिकोण हो । यसलाई माक्र्सवादी साहित्य, समाजवादी यथार्थवादी साहित्यका रुपमा पनि उल्लेख गरिन्छ । माक्र्सवादी साहित्य सिद्धान्तमा आधातिर रहेर सिर्जना गरिएको साहित्य नै प्रगतिवादी साहित्य हो ।
यथास्थितिको विरोध गर्ने, जीवन र जगतको विकास र परिवर्तनप्रति आस्था राख्ने, अन्धविश्वास एवं रुढीहरुको आलोचना गर्ने, तथ्य र तर्कमा विश्वासमा गर्ने, आलोचनात्मक चेतनालाई महत्व प्रदान गर्ने, सबै प्रकारका विभेद, अन्याय र उत्पीडनको विरोधमा उभिने, सामन्तवाद, पुँजीवाद–साम्राज्यवादको प्रतिवाद गर्ने, राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनताको पक्षमा उभिने साहित्य प्रगतिशील साहित्य हो । प्रगतिशील साहित्यले देशभक्तिको भावनालाई अघि बढाउन, विविधताका बीच एकता स्थापित गर्न, श्रमलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न, सबैप्रकारका विसंगति र विकृति विरुद्धको चेतनालाई अघि बढाउन, प्रतिगमनका विरुद्ध उभिन र परिवर्तनको प्रक्रियालाई उल्ट्याउन चाहने तत्वहरुका विरुद्ध संघर्ष गर्न, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समावेशीताका पक्षमा उभिन योगदान दिन्छ र दिनुपर्छ । आलोचनात्मक यथार्थवादी हुनु प्रगतिशील साहित्यको महत्वपूर्ण विशेषता हो । प्रगतिशील हुन माक्र्सवादी हुनुपर्दैन । प्रगतिशील साहित्यको सैद्धान्तिक आधार माक्र्सवादी साहित्य सिद्धान्त होइन । आलोचनात्मक चेतना र अग्रगामिता यसको मुख्य अभिलक्षण हो ।
समकालीन समयमा प्रगतिशील साहित्यको भूमिका कस्तो छ ?
यसको भूमिकालाई मूलतः सकारात्मकरुपमा लिनुपर्छ । यसले आफ्नो आलोचनात्मक चेतनालाई अझ प्रखर बनाउन र सिर्जनाको कलात्मक सामथ्र्यलाई अझ माझ्न जरुरी छ । प्रगतिवादी साहित्य पनि यथार्थको कलात्मक प्रतिविम्बमा अझ सशक्त बन्न आवश्यक छ भन्ने लाग्छ । प्रगतिशील, प्रगतिवादी स्रष्टाहरुको दायित्व आज अझ बढेको छ । उनीहरु आफ्नो बढेको भूमिकाप्रति अझ गम्भीर र संवदेनशील बन्नुपर्छ ।
खबरदारीभन्दा जी हजुरी भन्ने जमात बढी छ गर्ने सुनिन्छ । साहित्यमा यसको प्रभाव कस्तो छ ?
साहित्यमा यसको कमवेसी प्रभाव परेको छ । स्रष्टाले आलोचनात्मक चेतनालाई मर्न दिनहुन्न । जी हजुरी गर्नुभनेको आलोचनात्मक चेतनालाई मार्नु हो । पदमा पुग्ने लोभका कारण कतिपय स्रष्टामा यस्तो प्रवृत्तिको विकास भएको छ । पदको लोभ वा व्यक्तिगत फाइदालाई हेरेर स्रष्टाहरुले गलत कुराको आलोचना गर्ने नैतिक साहस गुमाउन हुन्न । यसले स्रष्टाको सामाजिक दायित्वलाई कमजोर बनाउँछ । साहित्य पनि कमजोर बन्छ ।
वर्तमान समयमा राजनीतिक र सामाजिक परिवेशलाई साहित्यमार्फत कसरी उजागर गर्न सकिन्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ ?
राजनीतिक र सामाजिक परिवेषलाई साहित्यमार्फत अभिव्यक्ति दिनु भनेको समकालीन यथार्थलाई अभिव्यक्ति दिनुभनेको हो । स्रष्टा आफ्नो लेखनको सामाजिक दायित्वप्रति सचेत र संवेदनशील बनेर नै समकालीन यथार्थका उज्याला अँध्यारा पक्षहरुलाई सार्थक अभिव्यक्ति दिन सक्छ । मूलतः स्रष्टाहरु सामाजिक र राजनीतिक जीवनका अँध्यारा पक्षहरुप्रति आलोचनात्मक बन्नुपर्छ र नेपाली समाजको अघिल्तिरको यात्रालाई सहयोग पु¥याउनुपर्छ ।
अहिले सांस्कृतिकरुपमा आएको विचलनबारे के भन्नुहुन्छ ?
राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र होइन सबै क्षेत्रमा सांस्कृतिक विचलन पाइन्छ । यस विषयमा मैले निरन्तर आफ्ना विचारहरु राख्दै आएको छु । यसलाई अर्को शब्दमा नैतिक मूल्यमा आएको स्खलनका रुपमा पनि उल्लेख गर्न सकिन्छ । यो स्खलनको रुप डरलाग्दो छ । यो स्खलन सबैभन्दा बढी राजनीतिमा देखिन्छ । मूल्यमा आएको स्खलनका कारण नेपाली समाजको समग्र विकास प्रक्रियामा नै बाधा उत्पन्न भएको छ । मूल्यमा ह्रास नेपालको मात्र होइन, समकालीन विश्वकै एक कटु यथार्थ हो । यसबाट कम्युनिष्ट आन्दोलन पनि प्रभावित छ । सत्ता राजनीतिसँग सम्बन्धित कम्युनिष्ट पार्टी र आन्दोलनमा यसको प्रभाव बढी देखिन्छ । समाज र पार्टी आन्दोलनमा सांस्कृतिक रुपान्तरणको प्रक्रियालाई अघि बढाएर र जीवन विरोधी सांस्कृतिक मूल्य एवं समकालीन पूँजीवाद तथा सामन्तवादका अवशेषहरुका विरुद्ध सघन वैचारिक संघर्ष गरेर नै यसमाथि विजय पाउन सकिन्छ ।
उपभोक्तावादी चिन्तन विकसित हुँदै गइरहेको बारे तपाइको धारणा के छ ?
उपभोक्तावादी चिन्तन र प्रवृत्ति नेपाली समाजका निम्ति हानिकारक छ । यो समग्र विश्वकै नम्ति नै हानिकारक छ । उपभोक्तावादको विशेषता मानिसलाई व्यक्तिवादी र जति खाए पनि नअघाउने खन्चुवा बनाउनु हो । उपभोक्तावादले मानिसमा असीमित तृष्णालाई जन्म दिन्छ । उपभोक्तावाद आवश्यकता होइन लालसा हो, अनन्त कामना र विलास हो । उपभोग र उपभोक्तावाद एउटै होइनन् । उपभोग आवश्यकता हो, उपभोक्तावाद सुखवादी दर्शन हो । उपभोक्तावाद पुँजीवादको उत्पादन हो । यसले पुँजीवादलाई मुनाफाका निम्ति सांस्कृतिक आधार प्रदान गर्छ । उत्पादन, बिक्री र मुनाफा आर्जन अत्यधिक उपभोगसँग जोडिएको छ । पुँजीवाद आवश्यकता मात्र बेच्दैन कृत्रिम आवश्यकता पनि निर्माण गर्छ र त्यसप्रति मनुष्यमा मोह पनि पैदा गर्छ । उपभोक्तावाद यसैलाई टेवा दिने र अघि बढाउने सांस्कृतिक चिन्तन हो । उपभोक्तावाद नेपाली समाजको अघिल्तिरको यात्राका निम्ति गम्भीर बाधकका रुपमा रहेको छ ।
श्रम र संस्कृतिबीच के सम्बन्ध छ ?
श्रम र संस्कृतिबीच गहिरो सम्बन्ध छ । श्रम भन्नाले शारीरिक र मानसिक श्रम भन्ने बुझिन्छ । श्रमका यी दुबै रुपको संस्कृतिको निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । संस्कृतिलाई मनुष्य निर्मित दोस्रो प्रकृति मानिन्छ । श्रम आवश्यकतासँग जोडिएको छ । श्रमको प्रक्रियामा नै मनुष्यले संस्कृतिको निर्माण गर्दै आयो र गर्दैछ । संस्कृतिको क्षेत्र निकै फराकिलो छ । सबै संस्कृति मनुष्यका भौतिक र आत्मिक क्रियाकलापका उत्पादन हुन् ।
प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग पनि जोडिनुभयो । नेपाली साहित्यको उन्नयनमा यसले निर्वाह गरेको भूमिकालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
समग्रमा यसको भूमिकालाई सकारात्मकरुपमा लिनुपर्छ ।
तपाइका कुनै नया कृति प्रकाशोन्मुख छन ?
केही कृतिहरु प्रकाशनको तयारीमा छन् ।
अबको जीवन कसरी बिताउने सोच बनाउनुभएको छ ?
मूलतः एक लेखकका रुपमा बाँकी जीवन बिताउने सोच बनाएको छु ।
थप छुटेका कुरा ?
अहिलेलाई यति नै पर्याप्त छ ।
Previous: सवारी साधनमा जनप्रतिनिधिको मोह, गाडीमै सकियो चार करोड
Next: उम्दा चलचित्रकर्मी रोहित